महिला, पुरूष, बच्चा सबैलाई संक्रमण देखियो । यो संक्रमण समुदायमा गएको संकेत हो, सतर्क रहोैंं ! – Namaste Dainik
महिला, पुरूष, बच्चा सबैलाई संक्रमण देखियो । यो संक्रमण समुदायमा गएको संकेत हो, सतर्क रहोैंं !
August 28, 2020 August 28, 2020 NamastedainikLeaveaComment on महिला, पुरूष, बच्चा सबैलाई संक्रमण देखियो । यो संक्रमण समुदायमा गएको संकेत हो, सतर्क रहोैंं !
काठमाडौँ — कोरोना संक्रमण महिलामा बढ्दै गएको छ । हालसम्मकै सबैभन्दा बढी १ हजार १ सय ११ जनामा बिहीबार संक्रमण पुष्टि हुँदा नयाँ संक्रमितमा करिब ३० प्रतिशत अर्थात् ३ सय ३४ जना महिला छन् ।
‘कोभिड–१९ संक्रमित महिला र पुरुषको अनुपात अन्तर कम भएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डा. वासुदेव पाण्डेले भने, ‘पहिले पुरुष धेरै संक्रमित थिए । अहिले महिलामा पनि संक्रमण बढ्न थाल्यो ।’ महिला बढी संक्रमित हुँदै जानुले समुदायमा संक्रमण बढेको संकेत गर्ने डा. पाण्डेले बताए । ‘अब घरभित्रै रहेका बूढापाका, दीर्घ रोगीमा समेत संक्रमण हुने जोखिम बढेको छ,’ उनले भने, ‘समुदायमा कोभिड संक्रमण छैन भनेर हिँडिरहेका थियौं । महिला, पुरुष, बच्चा सबैलाई संक्रमण देखियो । यो संक्रमण समुदायमा गएको संकेत हुन सक्छ ।’
करिब दुई महिनायता महिला र पुरुष संक्रमितको अनुपातमा व्यापक परिवर्तन देखिएको छ । असार पहिलो साता महिलाको दाँजोमा ११ गुणा बढी पुरुष संक्रमित थिए । असार ५ गतेसम्म ८ हजार २ सय ७४ जना संक्रमित भएकामा ९१ प्रतिशत अर्थात् ७ हजार ५ सय ६७ जना पुरुष र करिब ९ प्रतिशत अर्थात् ७ सय ७ जना महिला थिए । काठमाडौं उपत्यकामा बिहीबार देखिएका ३ सय ७७ संक्रमितमध्ये १ सय ४९ जना अर्थात् ३९.५२ प्रतिशत महिला छन् ।
मुलुकमा कोभिड संक्रमण देखिन थाल्दा सुरुमा पुरुष त्यसमा पनि युवा बढी थिए । उनीहरू बाहिरी मुलुकबाट आएका थिए । ‘तर संक्रमण स्थानीय तहमा हुन थाल्दा महिला र पुरुषको एक्स्पोजर बराबर हुन थाल्यो, महिलाको संक्रमण दर बढ्न थाल्यो, कुनै बेला पुरुष बढी जोखिममा थिए, अब महिला र पुरुष दुवै समान रूपमा जोखिममा छन्,’ वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले भने । हालसम्म मुलुकमा संक्रमितमध्ये २०.७६ प्रतिशत महिला छन् । बिहीबारसम्म ७ हजार ३ सय ७९ महिला र २८ हजार १ सय ५० पुरुष गरी ३५ हजार ५ सय २९ जनालाई संक्रमण भइसकेको छ । अहिलेसम्म कोभिडले मृत्यु भएका १ सय ८३ जनामा २३ प्रतिशत अर्थात् ४६ जना महिला र ७७ प्रतिशत अर्थात् १ सय ३७ जना पुरुष छन् ।
सघन उपचारमा १ सय ६४ जना
देशभर १ सय ४७ जना आईसीयू र १७ जना भेन्टिलेटरमा गरी १ सय ६४ जना संक्रमित सघन उपचारमा छन् । प्रदेश १ मा ११ जना आईसीयू र २ जना भेन्टिलेटरमा छन् । प्रदेश २ मा ४४ जना आईसीयू तथा वाग्मती प्रदेशमा ७१ जना आईसीयू र १५ जना भेन्टिलेटरमा छन् । गण्डकी प्रदेशमा ३ जना र प्रदेश ५ मा १८ जना आईसीयूमा उपचाररत छन् ।
पाँच सयभन्दा माथि सक्रिय संक्रमित भएको जिल्लाको संख्या पनि बढेको छ । हाल काठमाडौं, ललितपुर, धनुषा, पर्सा, बारा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही गरी आठ जिल्लामा पाँच सयभन्दा बढी संक्रमित उपचारमा छन् । हाल मुस्ताङ र हुम्ला गरी दुई जिल्लामा मात्र संक्रमितको संख्या शून्य छ ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार नै जासुसीको आरोपमा मुछिएपछि …
कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि धरान पनि भदौ ३ गतेसम्म लकडाउन !